Nin ku soo dhuuntay diyaarad ka timid Ethiopia iyo shaqaalaha Arlanda oo la yaaban sida uu ku badbaaday | Somaliska
Shalay ayaa waxaa shaqaalaha Ayroboorka Arlanda Stockholm la soo gudboonaatay la yaabkii aduunka ka dib markii ay diyaarada Ethiopian Airlines ka heleen nin ku soo dhuuntay mid ka mid ah sanduuqyada loo isticmaalo alaabta xamuulka. Ninkaan ayaa sanduuqaas oo aan hawo la’hayn ku jiray muddo 8 saacadood ah isagoo markii la helay ahaa mid xaaladiisu aad u liidato.
Booliska ayaa sheegay in ninkaan uu ku badbaaday maadaama uu helay ogsojiin intii uu sanduuqa ku jiray balse waxay ka gaabsadeen in ay sheegaan halka uu hawada ka helay. Maadaama sanduuqaan uu yahay mid xiran oo sida caadiga ah aan hawo lahayn.
Ninkaan ayaa markii uu xaalkiisu soo hagaagay magangalyo ka dalbaday Laanta Socdaalka (Migrationsverket) balse booliska ayaa baaritaan ku bilaabay sida uu ninkaan ku soo galay sanduuqa iyo in ay jidho cid ku luglahayd safarkiisa.
Ma ahan markii ugu horeysay ee qof uu ku soo dhuunto diyaarada Ethiopian Airlines, iyadoo sanadkii hore bishii Augusti sidoo kale uu nin kale ku soo dhuuntay diyaaradaan. Qaxootiga ka imaanaya Ethiopia ayaa aad u soo kordhay sanadkii hore.
Waarin lalayaabo qaabka Ooo ku soo galay yurub nin kaan nafsatiisa oo halis gilshay woo mudan yahay in la siiiyo magan galyo lkn waxaan oran lahaay inta la siinin magan galyada booliska sfcn a u baaraan
Cajiib waqtigisan dhamaan